Thailand Elite barnaamijka kaarka socdaalka fiisooyinka wali waa casaan 16 sano kadib
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Thailand War Deg Deg Ah » Thailand Elite barnaamijka kaarka socdaalka fiisooyinka wali waa casaan 16 sano kadib
Jebinta Wararka Caalamka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Investments • News • Dib-u-dhiska • Thailand War Deg Deg Ah • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Kaarka safarka fiisaha ee Thailand Elite
Kaarka safarka fiisaha ee Thailand Elite waxaa markii ugu horreysay soo saaray Ra'iisul-wasaarihii xilligaas Thaksin Shinawatra 16 sano ka hor. The Thai Privilege Card Co. (TPC) waligeed ma helin wax faa'iido ah waxayna uruurisay deyn dhan 240 milyan oo baht sanadkan maaliyadeed.
Haddii shirkaddu qori karto 2,600 xubnood oo cusub sannadkan, waxay u rogi kartaa madow.
Kuwa haysta kaarka safarka ee fiisada Elite wax safar ah malaha sababo la xiriira COVID-19.
Hay'adda Dalxiiska ee Thailand waxay lashaqeysaa Kaarka Asturnaanta ee Thailand si ay u bixiso gunno badan oo Elite ah mustaqbalka.
TPC waxay sheegaysaa in shirkadu ay mad madow gali doonto sanadkan hada hadii 2,600 xubnood oo cusub laga heli karo kaarka fiisada Thailand Elite. Tirada ugu badan ee hadda xubnaha Aasiya ka tirsan waa Shiine. Yurub gudaheeda, kala soocaas waxaa iska leh Boqortooyada Midowday (UK).
Inta badan dadka haysta waxay dib u dhigayaan booqashada Thailand sababtoo ah shuruudaha xafiisyada iyo sidoo kale mowjad cusub oo cudurka ah, gaar ahaan Bangkok. Ku Kaarka Mudnaanta ee Thailand Co. waxay sheegaysaa inay jirtay boqolkiiba 93 kobaca iibka 12kii bilood ee lasoo dhaafay. Waxaa jiray 2,552 xubnood oo dhawaan isqoray wadar ahaan 13,564 guud ahaan.
Fiisada Elite waxay bixisaa fiiso badan oo laga soo galo 5-20 sano iyada oo lagu soo celinayo lacag bixinta bilowga ah ee laga bilaabo 600,000 baht ilaa in ka badan 2 million baht, sida ku cad xulashada laga soo xulay tobanka kale. TPC waxay sheegaysaa inay jiraan 2 suuq oo waaweyn xilligan. Qaar ka mid ah ajaanibta ka weyn 50 sano waxay helayaan fiisada Elite si loogu badalo fiisooyinka hawlgabka ee hal sano ah iyo kordhinta joogitaanka taas oo sii kordheysa u baahan caymiska guud ee caafimaadka marka lagu daro daboolka gaarka ah ee COVID.